Harare to Chiredzi distance
Distance between Harare and Chiredzi is 364 KM (kilometers) and 911.79 meters. Harare is 226.7 miles away from Chiredzi.
Harare and Chiredzi Location
Harare is located in the Zimbabwe state of Harare at the longitude of 31.1 and latitude of -17.8. Chiredzi is located in the Zimbabwe state of Masvingo at the longitude of 31.7 and latitude of -21.1.
Harare direction from Chiredzi
Harare is located nearly north side to Chiredzi. Harare To Chiredzi road map direction from google will be integrated.
Time difference between Harare and Chiredzi
Time difference between Harare and Chiredzi is 0.040666666666667 decimal hours (0 : 2 : 26.4). Harare universal time is 2.07 UTC and Chiredzi universal time is 2.1106666666667 UTC. Harare is behind Chiredzi 0 hours and 2 Minutes and 26.4 seconds.
Harare To Chiredzi Travel Time
Travel time from Harare To Chiredzi will take 9 hours and 7.37 minutes if the vehicle keep an average speed of sixty kilometer per hour. Travel time by walk may take around 45.6 hours if you continuously walk at the speed of 6KM.
Harare to Chiredzi direction
The follwing Harare to Chiredzi direction map comming from google. Google distance may vary from our crow fly distance.
Harare Chiredzi information Note:
All information in this page about Harare and Chiredzi are approximate details. It is crow flies distance so the above travel information may be differ from motor road distance.
Dear Travellers / Visitors you are kindly welcome write more about Harare and Chiredzi.
Previous traveling experience from Harare to Chiredzi.
Tourist spots between Harare and Chiredzi road.
Hotels details, travel guide and booking information about Harare and Chiredzi.
You are welcome to provide accurate information about Harare and Chiredzi if the above information is not accurate.
Travel photos and other information related to Harare and Chiredzi.